China 400 * 400mm Kpọtụrụ na-eme ka ụlọ ọrụ Square na ndị nrụpụta | TUBO
Pipe Ime igwe Ọkachamara
86-18034562377 (Oge ọrụ)
Na-eme ka Square
120 * 120mm Kpọtụrụ na-eme na Square
150 * 150mm Kpọtụrụ na-eme na Square
200 * 200mm Na-eme kpọmkwem na Square
250 * 250mm Kpọtụrụ naanị na Square
300 * 300mm Kpọtụrụ ya na Square
400 * 400mm Na-eme kpọmkwem na Square
500 * 500mm Kpọtụrụ ya na Square
Bee na Ogologo Ogologo
Igwe anaghị agba nchara Pipe Line
FFX akpụ Technology
Shear na Welder
Oyi tingcha hụrụ
Akpaaka mbukota Machine
HSS hụrụ Agụba
TCT okirikiri Hụrụ Agụba
Ngwaọrụ ịgbanye zinc
Ngwakọta Pneumatic Of Steel Pneumatic Balers
Ngwakọta Pneumatic nke Steel Pneumatic Balers
(0.5-4.0) mm × 1300mm Slitting Nweta
Mpempe akwụkwọ igwe
(0.4-4) × 1600mm Slitting Nweta
A na-emepụta akụkụ anọ ma ọ bụ akụkụ anọ n'akụkụ welding tube.
Anyị nwekwara ike ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ.
ZIP IN AJQJ.
Ngwongwo nchara → Uncoiling → Flattening / Leveling → Shear & End Cutting → Coil Accumulator ming → → → eldgbado → Deburring Co Mmiri na-ekpuchi → Sizing → Straightening → Cutting → Run-out tabl
1.nwere na gburugburu n'ime square & rektangulu akpụ ụzọ, otú a bụ ihe ka mma maka udi nke cross ngalaba, comparatively, ọkara dayameta nke n'ime rac bụ obere, na nkuchi bụ ewepụghị, n'akụkụ bụ mgbe, zuru okè udi nke tube.
2.Ogologo ahịrị dum dị ala, ọkachasị ngalaba nyocha.
3.The obosara nke ígwè warara bụ banyere 2.4 ~ 3% obere karịa na nke gburugburu n'ime square / akụkụ anọ, ọ nwere ike ịzọpụta na-eri nke akụrụngwa.
4.Ọ na - anabata ụzọ gbagọrọ agbagọ ọtụtụ, zere ike axial na akụkụ abrasion, belata nhazi ahụ ma hụ na ịdị mma, ka ọ na - ebelata ike ọgbụgba na abrasion ala
5.It adopts jikọtara ụdị ala na ọtụtụ nke ila, ọ na-amata na otu set nke ala nwere ike na-emepụta niile nha nke square / akụkụ anọ akpa dị iche iche nkọwa, ọ ibelata ụlọ ahịa nke ala, belata na-eri banyere 80% on ala, ngwa ngwa na bankroll ntụgharị, mkpụmkpụ oge na ngwaahịa ọhụrụ.
6.All ala bụ nkịtị mbak, ọ dịghị mkpa dochie rollers mgbe mgbanwe tube size, naanị ukpụhọde ọnọdụ nke rollers site moto ma ọ bụ PLC, na ghọtara zuru akpaka akara; ọ na-ebelata oke igwe na-agbanwe oge, na-ebelata ike ọrụ, meziwanye nrụpụta ọrụ.
Square tube 200 x 200 - 400 x 400 mm
Akụkụ anọ tube 200 x 150 - 500 x 300 mm
Ọkpụrụkpụ nke mgbidi 5,0 mm - 16,0 mm
Ogologo tube 6.0 m - 12.0 m
Ọsọ Line Max. 60 m / nkeji
Ịgbado ọkụ Method Solid State High Frequency ịgbado ọkụ
Akpụ Usoro Kpọmkwem akpụ na Square na akụkụ anọ Tubes
.Dị Square Pipe (mm) Akụkụ anọ Pipe (mm) Ọkpụrụkpụ (mm) Ọsọ (m / min)
Nke gara aga: Igwe anaghị agba nchara tube Mill
Osote: Igwe anaghị Pipe Mill
1. Q: you na emeputa?
A: Ee, anyị bụ ndị nrụpụta. Ihe karịrị afọ 15 R&D na Manufacturing Ahụmahụ. Anyị na-eji ihe karịrị 130 CNC machining equipments na-ekwe nkwa na anyị na ngwaahịa zuru okè.
2. Q: Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata?
A: Anyị na-agbanwe agbanwe na usoro ịkwụ ụgwọ, biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa.
3. Q: Kedu ozi ị chọrọ iji nye nkwupụta?
A: 1. Ike dị ukwuu nke ihe,
2.A chọrọ nha niile (na mm),
3. Mgbidi mgbidi (min-max)
4. Ajụjụ: Gịnị bụ uru gị?
A: 1. Advanced ebu òkè-eji technology (FFX, Direct akpụ Square). Ọ na-echekwa ọtụtụ itinye ego.
2. Ihe nchoputa ohuru ohuru ohuru iji nwekwuo mmeputa ma belata oru ike.
3. Ihe karịrị afọ 15 R & D na Mmepụta Ahụmahụ.
4. 130 CNC machining equipments na-ekwe nkwa na anyị na ngwaahịa zuru okè.
5. Emebere nke oma dika ndi choro choro.
5. Q: have nwere mgbe ahịa nkwado?
A: Ee, anyị nwere. Anyị nwere mmadụ 10 - ọkachamara ma sie ike otu nrụnye.
6.Q: Kedu maka ọrụ gị?
A: (1) Otu afọ akwụkwọ ikike.
(2) Inye ihe ndozi maka oge ndu na onu ahia.
(3) Inye nkwado teknụzụ vidiyo, ntinye mpaghara, inye ọrụ na ọzụzụ, nkwado ntanetị, ndị injinia dị maka igwe ọrụ na mba ofesi.
(4) Nye ọrụ ọrụ aka maka imezigharị ihe owuwu, ndozi.
China Kpọmkwem akpụ Iji Square
Kpọmkwem akpụ gaa Square
Kpọmkwem akpụ Iji Square Factory
Kpọmkwem akpụ gaa Square Maka ire ere
123456546 Kụrụ Tinye ịchọ ma ọ bụ ESC imechi